इन्टरनेट मन्त्रालयहरू - ख्रीष्टका चर्चहरू को हुन्?
ख्रीष्टका मण्डलीहरू को हुन्?
द्वारा: बिट्सेल बैरेट बिक्सटर
नहीं। ईश्वर पिता ले केवल एक मात्र मानिन्छ जसलाई प्रार्थना संबोधित हुन सक्छ। यो अझै पनि बुझ्न सकिन्छ कि ख्रीष्ट ईश्वर र मानिसको बीच मध्यस्थ स्थितिमा रहेको छ (हिब्रू 7: 25)। यसैले सबै प्रार्थनाहरू मसीह मार्फत, वा मसीहको नाममा प्रस्तुत गरिन्छ (यूहन्ना 16: 23-26)।
यो आशा गर्दछ कि चर्चको प्रत्येक सदस्य प्रत्येक भगवानको दिनमा पूजाको लागि भेला हुनेछ। उपासनाको एक केन्द्रीय भाग प्रभुको भोज खाएको हो (प्रेरित 20: 7)। जबसम्म प्रायोगिक रूपमा बाधा भएन, प्रत्येक सदस्यले यो साप्ताहिक नियुक्तिलाई बाध्यकारी मान्दछ। धेरै उदाहरणहरूमा, बिरामीको रूपमा जस्तो, प्रभुको भोजलाई उपासनामा भाग लिनदेखि रोक्न सकिन्छ।
चर्चको विशिष्ट पुजाको नतिजाको रूपमा - नयाँ नियम विश्वास र अभ्यासमा फर्किने - एपप्ला गायन उपासनामा प्रयोग गरिएको एकमात्र संगीत हो। यो गायन, संगीतको मेकानिकल उपकरणहरूद्वारा असक्षम हुनु, प्रेषित चर्चमा प्रयोग गरिएको सङ्गीत र त्यस पछि धेरै शताब्दीका लागि सङ्गीत अनुरूप (एफिसी 5: 19)। यो महसुस गरिएको छ कि नयाँ नियममा फेला परेका उपासनाहरूमा संलग्नताको कुनै अधिकार छैन। यो सिद्धान्तले मोबाईल संगीतको प्रयोगलाई मोमबत्ती, धूप, र अन्य समान तत्वहरूको प्रयोगको साथ मेटाउँछ।
हो। मत्ती 25 र अन्य ठाउँहरूमा ख्रीष्टको विवरण अनुहारमा लिइएको छ। यो विश्वास छ कि मृत्यु पछि प्रत्येक मानिसलाई परमेश्वरका सामु न्यायमा आउनु पर्छ र उहाँले उनीहरूको समयमा काम गर्ने कामको अनुसार न्याय गरिनेछ (हिब्रू 9: 27)। न्यायको घोषणा पछि उहाँले स्वर्ग वा नरकमा अनन्तकाल बिताउनु हुनेछ।
संयोगको अस्थायी स्थानमा धर्मशास्त्रहरूमा कुनै सन्दर्भको अनुपस्थिति जुन आत्माले अन्ततः स्वर्गमा पठाइनेछ जुन विष्फोटको सिद्धान्तलाई स्वीकार्दछ।
हप्ताको प्रत्येक पहिलो दिन चर्चका सदस्यहरूले "भण्डारमा राखेर उनीहरूलाई समृद्ध बनाइदिए" (एक्सएनएक्सएक्स कोरिन्थी 1: 16)। कुनै पनि व्यक्तिगत उपहार को मात्रा सामान्यतया एक मात्र यो छ जसले यो र प्रभुलाई बुझाउँछ। यो नि: शुल्क-प्रस्ताव प्रस्ताव भनेको चर्च हो। कुनै आकलन वा अन्य लेवी बनाइयो। कुनै पनि पैसा बनाउने गतिविधिहरू, जस्तै कि बजार वा उत्कृष्टहरू, मा संलग्न छन्। कुल यदि लगभग $2हरेक वर्ष यस आधारमा दिइएको छ।